आफ्नै छोराले गरे बुवाको हत्या : फरार छोरा प्रहरीको फन्दामा
खोटाङ : खोटाङमा धारिलो हतियार प्रहार गरी आफ्नै छोराले बुवाको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-२ सोल्माका ७५ वर्षीय कुमार राईलाई उनका आफ्नै छोरा ३७ वर्षीय सुवर्ण राईले हत्या गरेका हुन् ।
आइतबार बिहान ४ बजे बुवालाई धारिलो हतियार प्रहार गरी फरार रहेका राईलाई खोजी गरी नियन्त्रणमा लिन स्थानीयवासीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीयबासिले प्रहरीमा जानकारी गराउनसाथ तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक अमरप्रसाद गजमेरको टोली घटनास्थल पुगी फरार रहेका अभियुक्त राईलाई अल्छेढुंगाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक सागर साहले मध्यान्हलाई बताए ।
२०७१ साल असार १७ गते राति टर्चको प्रकाशले आँखामा हानेर अलमल्याउँदै जिल्लाकै साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छा पिनालाखाका हरिजङ राईको सुन र नगद लुटपाटमा संलग्न चार जनामध्येका एक सुवर्णले डाँका र हातहरियार मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरेको केही वर्षपछि बुवामाथि नै धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रहरी निरीक्षक गजमेरले जानकारी दिए ।
मृतक राईको शव परिक्षण गर्न जिल्ला अस्पताल दिक्तेल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना के कारणले भएको भन्ने बारे प्रहरीले अभियुक्त राईलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
१६ वर्षीया नाबालिकालाई जवरजस्ती करणी गर्ने एक युवक पक्राउ
खोटाङ : खोटाङमा एक १६ वर्षीया नाबालिकालाई जंगलमा बोलाएर जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका -६ नेर्पाका ३१ वर्षीय अरुण राई पक्राउ परेका हुन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका –५ लफ्याङकी एक नबालिकालाई ललाईफकाइ गरि बुधबार राति ९ बजे नजिकैको जंगलमा लगेर जवरजस्ती करणी गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी एवम् प्रहरी निरीक्षक अमरप्रसाद गजमेरले बताए ।
पीडित नाबालिकाले राईले आफुमाथि जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको र सोही उजुरीको आधारमा राईलाई पक्राउ गरी थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक सागर साहले मध्यानलाई जानकारी दिए ।
अस्मिता हत्या प्रकरण : भित्रिमधेस क्षेत्र तनावग्रस्त, तीन दिनपछि शवको पोष्टमार्टम
डडेल्धुरा : कोरोना विरुद्धको खोप बोकेर जोगबुडा अस्पताल आएकी परशुराम नगरपालिका–८ स्थित जमेरानी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रकी कार्यालय सहयोगी अस्मिता धामीको हत्या भएको भन्दै स्थानीयले परशुराम नगरपालिका घेराउ गरेका छन् ।
२६ वर्षीया कार्यालय सहयोगी अस्मिताको घरबाट हिडेको चारदिन पश्चात विभत्स अवस्थामा जंगलमा शनिबार शव भेटिएको थियो । शव भेटिएको तीन दिनपछि सोमबार जोगबुडा अस्पतालमा शव परीक्षण गरिएको छ । शवको पोष्टमार्टम रिर्पोटमा उनको बलात्कार र हत्या भएको भन्ने विषयमा कुनै तथ्य फेला नपरेको अनुसन्धानमा संलग्न उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अब उनको भिसेरा परीक्षण गरिने जनाएको छ ।
असार २ गते आधारभूत स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र जमरानीबाट कोरोनाको बचत खोप र स्वास्थ्य सामग्री लिएर जोगबुडा अस्पताल पुर्‍याउन भनि निस्केकी अस्मिताको शव शनिबार परशुराम नगरपालिका–९ को हट्वानी सामुदायिक वनमा फेला परेको थियो ।
जोगबुडा अस्पतालमा विज्ञ चिकित्सक नभएको भन्दै शवको पोष्टमार्टममा ढिलाई भएको हो । पोष्टमार्टममा ढिलाई भएपछि सोमबार ठुलो संख्यामा आएका स्थानीयले परशुराम नगरपालिकाको कार्यालय घेराउगर्दै नगरप्रमुख भिमबहादुर साउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । अस्मितको हत्यारा पत्ता लगाई निष्पक्ष छानबिन गरी हदै सम्मको कारवाही गरिनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।
पीडित परिवारलाइ उचित राहतको व्यवस्था गरिनु पर्ने, पीडित परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, परशुराबम–८ को जमरानी आधारभुत स्वास्थ्य इकाई केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेर अस्मिता स्मृति आधारभुत स्वास्थ्य इकाई केन्द्र नामाकरण गरिनु पर्ने, मृतक अस्मिताका दुई छोरीको माध्यामिक तह सम्मको पठन–पाठनका लागि छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने र उनीहरुको उच्च शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्ने लगायतका माग पीडित पक्षले अघि सारेका छन् ।
अस्मितालाई न्यायका लागि राखेको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख साउदले मृतकको शबको पोष्टर्माटम भईसकेको र संघीय र प्रदेश प्रहरीको उच्च स्तरीय अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलाको अनुसन्धान अघि बढाईसकेकाले दोषी उम्किन नसक्ने जिकिर गरे । पीडित पक्षबाट अघि सारिएका अन्य मागहरु सम्बोधनका लागि नगरपालिका र आफुले व्यक्तिगत रुपमा पनि कुनै कसर बाकी नराख्ने नगरप्रमुख साउदले बताए ।
सो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दुई वटा टोली परिचालन गरेको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट छुट्टाछुट्टै टोली खटाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र थापाले मध्यान्हलाई जानकारी दिए । शव भेटिए लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख डीएसपी महेन्द्र नेपालसहितको प्रहरी टोलीसमेत घटनास्थलमै पुगेर अनुसन्धानमा संलग्न छ ।
कपिलवस्तुको लोहरौलामा लुकाएर राखिएको हातहतियार बरामद
कपिलवस्तु : कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिकामा लुकाएर राखिएको हातहतियार बरामद भएको छ । कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. ८ लोहरौला बस्ने अन्दाजी ३२ वर्षीय अस्लम मुसलमानको घरबाट १ कि.मी.उत्तर पुर्व पर्ने आफ्नै खेतमा रहेको फुसले छाएको कच्ची बाख्रा गोठबाट हातहरियार बरामद भएको हो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरका प्रहरी निरीक्षक रण बहादुर विष्टको कमाण्डमा र ईलाका प्रहरी कार्यालय बहादुरगंजबाट प्रनानि गगन शाहीको कमाण्डमा खटिएको संयुक्त टोलीले खानतलासी गर्दा गोठको छानोको खरमुनि बोरा भित्र लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा १२ बोर बन्दुक २ थान, सर्टगनमा लाग्ने लाईभ कार्टिज (जंगी राउण्ड) ५ थान, सर्टगनको पड्किएको खोका ११ थान, अं.३०० ग्राम बारुद जस्तो देखीने कालो धुलो पदार्थ, ५७ वटा छर्रा र ३ वटा जनावरलाई पासो लगाउने जाल फेला पारी बरामद गरेको हो ।
मुसलमानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
दर्जनौं गम्भीर अपराधका घटनामा संग्लग्न आरके नयाँदिल्लीबाट पक्राउ
लहान : प्रदेश २ प्रहरीको सक्रियतामा नेपालको कुख्यात अपराधी नयाँदिल्लीबाट पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका आरके यादवलाई नेपाल लगायत भारतमा समेत हत्या, डकैती जस्ता दर्जनौं गम्भीर घटना गरेको भन्दै मुद्धा दर्ता भएका छन् । धेरै वर्षदेखि नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेको थियो । तर एक दशकपछि प्रदेश २ प्रहरी र सुपौल पुलिसले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।
यसरी पक्राउ परे आरके ?
सिरहाको झिजोल गाउँका निवासी सामोननाथ यादवलाई आरके यादव र उमेश यादवले वरियापट्टी गाउँबाट अपहरण गरेका थिए । त्यसपछि उनको परिवारका सदस्यबाट १ करोडको फिरौतीको माग गरिएको थियो । यसैबीच, नेपाल प्रहरीले अपहरण गरेको सोमनाथलाई भारतको सुपौल जिल्लामा कतै अपहरणकारीहरूले लुकाएर राखेको जानकारी पाए । इन्टरपोल नयाँदिल्लीले जारी गरेको रेड कार्नर सूचनापछि सुपौल एसपी मनोज कुमारलाई यसबारे पूर्ण जानकारी दिइयो । यसैक्रममा सोमनाथ यादवको अपहरण गरी शरिर बन्धक बनाई वेपता बनाएको कसुरमा भारतीय प्रहरीसँग २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धिरज प्रताप सिंहले समन्वय गरी यादवको अपहरणमा संलग्न भारतीय नागरिक उमेश यादवलाई प्रदेश २ प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा अनुसन्धान भैरहेको छ ।
२ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धिरज प्रताप सिंहले कुख्यात अपराधी रामकुमार यादवलाई पक्रिन सुपौल पुलिसको सहयोग लिएको थियो । त्यसपछि एसपी मनोज कुमारले डीएसपी रामानन्द सिंह कौशलको नेतृत्वमा एसआईटी गठन गरे र आफैँले अनुगमन गर्न थाले । यसैबीच एसआईटीले सूचना पाए कि अपहरण पछि सोमनाथ यादवलाई सुपौल र मधुबनी जिल्लाको केही ठाउँमा राखिएको छ । हरेक दिन बसोबास गर्ने ठाउँ बदल्छ । पुलिसलाई सूचना प्राप्त भयो कि उमेश यादवको घर निर्मलीको महुआ गाउँमा राखिएको छ । अपहरणकारीका बाबु हरि नारायण यादवको बयानमा निर्मली प्रहरी चौकीमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यस अपहरणमा संलग्न मधुबनी जिल्ला निवासी सतीश यादव पक्राउ परेका थिए ।
सोमनाथ यादवको हत्या
घटनामा पक्राउ परेका सतीश यादवसँग प्रहरीले सोधपुछमा हत्याको स्वीकार गर्दै सोमनाथको हत्या गरेपछि उनको शव कोसी नदीमा फ्याँकिएको बताए । त्यसपछि पुलिसले गोताखोरको सहयोगमा ठाउँ खोज्यो, तर कोसी नदीमा पानीको कारण शरीर भेटिएन । त्यसपछि पुलिसले अनुसन्धान जारी राखी अपहरणको मोबाइल आरके यादवको ससुरालबाट बरामद गरेको छ । सिरहाको गोठटोलमा रहेको आरके यादवको घरमा प्रहरीले छापा मारे तर आरके यादव फेला परेनन् ।
नयाँदिल्लीमा लुकेर बसेका थिए आरके
सुपौल र प्रदेश २ प्रहरीले आरके यादवको खोजी गर्दै थिए । तब आरके यादव नयाँदिल्लीमा थिए । सूचना पाउने बित्तिकै सुपौल पुलिस र प्रदेश २ प्रहरीको सन्युक्त टोलिले उनलाई नयाँदिल्लीबाट पक्राउ गरी सुपौलमा ल्यायो ।
नेपाल लगायत भारतमा दर्जनौं मुद्दा
अपराधी आरके यादव पक्राउ पर्नु नेपालको लागि मात्र होइन् इन्टरपोल र धेरै ठूला संस्थाहरुको लागि ठूलो सफलता भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसमाथि नेपाल र भारतमा दर्जनौं हत्या, अपहरण, डकैती, बम बिष्फोटनका घटनाहरू दर्ता भएका छन् ।
यस गिरफ्तारीले फेरि नेपाल र भारतको सहयोगलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा राखिएको छ । एसपी मनोज कुमारका अनुसार पक्राउ परेका आरोपीलाई जेल पठाउने कि नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने बारे पछि निर्णय गरिनेछ ।
दीपक पाण्डे हत्या प्रकरण : अनैतिक सम्बन्ध लुकाउन श्रीमतीकै योजनामा हत्या
कपिलवस्तु : कपिलवस्तुमा माओवादी नेता दीपक पाण्डेको हत्याको मुख्य योजनाकार उनकै पत्नी रहेको पुष्टि भएको छ ।
सोमबार कपिलवस्तुमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले अनैतिक सम्बन्धका कारण श्रीमती महिमाले दबाब दिएर पाण्डेको हत्या गरेको खुल्न आएको जानकारी दिएको हो ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–१ आनन्दवाग बस्ने ओमप्रकाश यादव र पाण्डे श्रीमती महिमाबीच ५ वर्षदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुबैबीचको सम्बन्ध दीपकले थाहा पाएपछि श्रीमान श्रीमतिबीच मनमुटाव आएको थियो । मृतक पाण्डे र यादबबीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको र दीपक दुबैका लागि समस्या हुन थालेपछि हत्याको योजना बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पटकपटक हत्याको योजना बनाउन श्रीमतीले ओमप्रकाशलाई दवाब दिएपछि थेग्न नसकेर घटना गराइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए ।
लामो समयदेखि पाण्डेमाथि गरेको निगरानी र मुभमेन्टका कारण गते जेठ ५ गते राति करिब ११ बजेतिर गोली प्रहार गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
जीतपुर–तौलिहवा सडक खण्ड अन्तर्गत कपिलवस्तु नगरपालिका–६, गोबरीमा उनीमाथी ३ जनाले गोली प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते पाण्डेको जेठ १० गते शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा मृत्यु भएको थियो ।
हत्यामा रमजान साह मुसलमान, साकिर अली पखिया र ओमप्रकाश संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा प्रयोग गरिएको पेस्तोल खरिद गर्न, ओसारप्रसार र घरमा लुकाइ छिपाइ राख्न सहयोग गर्ने ७ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
रौतहटमा एक महिलामाथि धारिलो हतियार प्रहार
रौतहट : रौतहट जिल्लामा एक महिलालाई ज्यान मर्ने उद्देश्यका साथ कुटपिट गरि फालेको अवस्थामा भेटिएको छ ।
रौतहट जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका वडा नं ५ टोल मिठुआवामा बस्ने सरपति देबीलाई ज्यान मर्ने उद्देश्यले कुटपिट गरि फालेको अवस्थामा भेटिएको हो ।
स्थानीयहरुले महिलालाई फालेको अवस्थामा देखेर प्रहरीलाई जनकारी गराएका थिए । घाइते महिलाको चन्द्रपुरस्थित सिभिल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । उक्त महिलाको जिउ र टाउकोमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाइते महिलाको जिउ तथा टाउकोमा कम्तीमा १०० भन्दा बढी टाका लगाइएको छ ।
यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको डिएसपी द्वारिका घिमिरेले जनकारी दिएका छन् ।
दीपक पाण्डेको हत्यामा प्रयोग भएको पेस्तोलसहित थप एक जना पक्राउ
कपिलवस्तु : कपिलवस्तुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला नेता दीपक पाण्डेको हत्यामा प्रयोग भएको पेस्तोल प्रहरीले बरामद गरेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ आनन्दबाग स्थित कैलाश टोलका पूर्ण वीर पाल्पाली उर्फ मैसिनको घरबाट कटुवा पेस्तोल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
कटुवा पेस्तोल र दुई राउण्ड गोली सहित ३३ वर्षीय पूर्ण वीरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य पाण्डेलाई जेठ ५ मा ओम प्रकाश यादव र साकिर अलि पाखिया सहितको समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । हत्यापछि साकिरले आफूले चलाएको पेस्तोल पूर्ण वीरलाई राख्न दिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रहार गरे एसिड
रौतहट : रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा एक महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ की ३८ वर्षीया दिपिका विक माथि एसिड प्रहार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक लिलाराज लामिछानेले बताए ।
विकलाई उनकै श्रीमानले दिपक विकले एसिड प्रहार गरेका हुन् । घरमा झगडा परेपछि केही छिन बाहिर गएका दिपकले बोतलमा केही चिज ल्याएर छ्याप्न खोज्दा दीपीकाले खोस्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।
सोही क्रममा उनको हात र पेटको भागमा एसिड परेको घाइते दिपिकाले बताइन् । उनको चन्द्रपुरमा रहेको एपोलो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
दिपिकाको शरिरको करिब १८ प्रतिशत भाग जलेको अस्पतालले जनाएको छ । उनको देब्रे हात र पेटमा एसिड परेको छ ।
पीडित महिलाका अनुसार शनिबार साँझ ६ बजेतिर विवाद हुँदा उनका श्रीमानले एसिड आक्रमण गरेका थिए । एसिड प्रहार गर्ने श्रीमान दिपकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक लामिछानेले जानकारी दिए ।
चन्द्रपुरमा सुनचाँदी गहना पसल सञ्चालन गरेका विकले सोही पसलबाट एसिड लगेर श्रीमतीलाई प्रहार गरेका थिए । पक्राउ परेका विकलाई आवश्यक अनुसन्धान पछि कानून बमोजिमकको कारवाही हुने इलाका प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं : काठमाडौँको बौद्धस्थित नयाँवस्तीको प्लानिङ चउरमा बोराभित्र शवको केही भाग फेला परेको छ । आज बिहान दुँबो टिप्न गएका स्थानीयले बोराभित्र शवको घुँडा र खुट्टाको भाग देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नविन कार्कीका अनुसार कतै हत्या गरेर जलाएर शवको एक भाग यहाँ फालेको हुनसक्ने अनुमान छ । दायाँ खुट्टाको भाग अर्ध जलेको अवस्थामा फेला परेको छ ।